3 Ntinye si oge ezumike 2015 iji nyere gị aka na 2016 | Martech Zone
Splender nyochara ihe karịrị nde azụmahịa anọ na saịtị 800 + iji hụ otú ịzụ ahịa n'ịntanetị na 2015 ma e jiri ya tụnyere 2014. Givingbọchị ekele bụ ụbọchị ahịa kachasị n'ịntanetị nke oge a na kọmputa na kọmputa na-ebute ụzọ na onyinye mana uwe na ngwa na-eduga n'uto. Cyber ​​Monday ka bụ ụbọchị ezumike ezumike kachasị ukwuu na ntanetị, yana 6% nke ire ere ezumike. Agbanyeghị, ire ere belatara 14% kemgbe afọ 2014.
N'uche m, enwere ụzọ ole na ole ebe a:
Planning - ndị na-azụ ahịa na-agbasa omume ịzụta ha ma ọ nwere ike ọ gaghị achụso iguzo n'ahịrị na Black Friday maka azụmahịa. Ndị na-ere ahịa na saịtị azụmahịa e-commerce kwesịrị ile anya na ịgbasa onyinye ha na oge nke oge na-eduga na ekeresimesi.
Nhazi - Cochịkọta ntanetị na ire ahịa ahịa, mbupu, nnara na nlọghachi maka oge ezumike nwere ike ịchụpụ ọtụtụ ahịa ịntanetị ma ọ bụ nkwakọba ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa mara na ọ dị nfe ma nwee ntụkwasị obi na ọzizi nke nnyefe, ha ga-azụta ya. Afọ ndị a sụọ ngọngọ site FedEx nwere ike imebi ntụkwasị obi ahụ.
Marketing - ha abụọ ga-achọ ahịa siri ike na 2016. Kama itinye uche na bọmbụ nke broshuọ na ire ere ahịa, ekwenyere m na nnukwu ndị na-ere ahịa ga-enyere ndị ahịa ha na atụmanya aka ịhazi oge ahụ, chọta azụmahịa kachasị mma, nyere ha aka ịhazi ịkwụ ụgwọ ha, ma hụ na ha nyefere ha n’oge.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịhazi oge buru ibu na ohere maka ịba ụba na-aga n'oge. Ọ bụrụ na ịnweghị usoro site na njedebe oge ọkọchị na otu ị ga-esi gosi ọdịiche dị n'etiti ịzụ ahịa ezumike gị na ndị asọmpi gị, ịnwere ike ịgafe egwuregwu ahụ. Ihe mgbaru ọsọ gị taa kwesiri ibu n'ihu inweta ndị debanyere aha na nbudata ngwa nke mere na ị nwere ndị na-ege ntị buru ibu n'ahịa ka oge ahụ ga-amalite. Ka ọ na-erule Mee, ị ga-enwe usoro maka oge a.
Ndi webatara ihe omuma a Ihe omimi, na kasị eweta ọrụ nke mmemme iguzosi ike n'ihe ịzụ ahịa nke ụlọ ọrụ na US.
Tags: 2014 na 20152015Krismascyber mondayezumike infographicusoro ịzụ ahịa ezumikeemume ezumikesppleinye ekele